Gal-Mudug oo ku Baaqday in xal laga gaaro Colaadihii Dhuusa-Mareeb – Radio Daljir
Maarso 5, 2016 4:53 b 0
Bacaadweyn, 05-March, 2016 -(Daljir)_Maamulka Galmudug ayaa shaaciyay in wada-xaajood ay la galaan dhigooda Ahlu-sunna oo gacanta ku haya deegaanno ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Somalia.
Wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta maamulka Galmudug Cismaan Maxamed Cali ayaa tibaaxay inay sameeyeen isku dayo ay ku doonayaan inay ku qanciyaan Ahlu-sunna, isagoo intaasi raacshay mas’uuliyiinta ururka qaarkood inay la xiriiren oo ay sii wada doonan dadaalkooda ku aadan sidii ay ula hadli lahaayeen hoggaamiyayaasha ururka.
Waxaa kalo uu sheegay wasiirka dastuurka Galmudug inay ku howlan-yihiin sidii xasilooni loogu soo dabali lahaa dhamman deegaannada uu maamulka ka taliyo ee gobollada Galgaduud iyo qaybo ka mid ah gobolka Mudug.
“Galmudug waxay diyaar u tahay wax walba inay ku dhammeyso wada-hadal,dhanka Ahlu-sunna diyaar ayaan u nahay inan la xaajoono oo an ka qancino wax walba oo ay tabanayaan,wuxuuna yahay ajandaheena inan la fadhiisano cid walba oo an xabad wax ku dooneyn,”ayuu yiri wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta Galmudug oo la hadlay warbaahinta gudaha.
Wasiirka ayaa sheegay wasiirku inaysan waxba ka jirin eedeynta ugu timid Ahlu-sunna oo ku aadan ciidamo maamulka ka tirsa inay qayb ka ahaayeen dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb.